Ihowuliseyili PP Ukupakisha umgca extrusion umgca yoMvelisi kunye noMthengisi | Qiangsheng
Umgca Ukupakisha ibhanti extrusion PP
Ukuveliswa kwezinto ezinokusetyenziselwa ukuvelisa iibhanti zokupakisha ngezinto ezinokurisayikilishwa okanye izinto ezintsha ezixubeneyo. Kuyenzeka ukongeza i-calcium carbonate ngokweemeko zabathengi ukunciphisa iindleko zemveliso, ukwandisa inzuzo yemveliso, kunye nokhuphiswano kwintengiso.
1. Ukuveliswa kwemveliso ekrwada kunokusetyenziselwa ukuvelisa iibhanti zokupakisha ngezinto ezinokurisayikilishwa okanye izinto ezintsha ezixubeneyo. Kuyenzeka ukongeza i-calcium carbonate ngokweemeko zabathengi ukunciphisa iindleko zemveliso, ukwandisa inzuzo yemveliso, kunye nokhuphiswano kwintengiso.
2. Iziphumo ziphezulu, kwaye isantya somgca ogqityiweyo sinokufikelela kwi-260m / min.
3. Ukubonakala komatshini wonke kulungiselelwe, kuhle kwaye kudidi oluphezulu, kuhlala ixesha elide kwaye kuzinzile.
4. Ukuchaneka okuphezulu kwamalungu kwenza ukuba imveliso ibumbe umgangatho ozinzileyo, ububanzi kunye nobunzima ukuhla kungaphantsi kakhulu komgangatho wesizwe; isixhobo esikhethekileyo sokutshintsha inethiwekhi sinciphisa kakhulu ixesha lokutshintsha kwenethiwekhi.
5.Umgangatho ophezulu wokuchaneka komgangatho, usebenzisa uphawu olwaziwayo, uyilo oluyingqayizivele lweparamitha, kunye nezinto eziluncedo ze-extrusion enkulu, iplastikhi elungileyo, ubulukhuni obuphezulu kunye nokumelana nokunxiba okuphezulu.
6. Qwalasela ukunciphisa izixhobo okomeleleyo okukhawulezileyo, ukunxiba isantya esiphezulu kunye nobomi benkonzo ende.
7. Uyilo oluyingqayizivele lwesixhobo sokulungisa ukulawula imveliso.
8. Inkqubo eyahlukileyo yokufudumeza i-oveni, indlela yokubuyisela yangaphakathi yangaphakathi, isebenzisa ngokupheleleyo amandla obushushu ukunciphisa kakhulu ukulahleka kwamandla.
9. Inkqubo eyoluliweyo eyodwa, kunye nokuqina okuhle kunye nobubanzi obuzinzileyo.
Inkqubo eyahlukileyo yokupholisa iluphu, iiseti ezininzi zesikhokelo sokuhambisa, esenza ukuba umtya upholise kwaye unciphe ngokugqibeleleyo, imveliso izinzile kwaye ubungakanani buchanekile ngakumbi.
11. Inkqubo yokutsalwa kwesihlanu, ukubambelela kuzinzile, izixhobo zihamba kakuhle, izinga lokungaphumeleli lincitshisiwe, kwaye iindleko zokugcina zigcinwe ngama-60%.
Ukuchaneka okuphezulu kunye nesixhobo sokucinezela, uxinzelelo olunokuhlengahlengiswa, ukucacisa kunye nokuhombisa okuhle, umgangatho wemveliso ophuculweyo, onokuthelekiswa neYurophu, iMelika, iJapan kunye noMzantsi Korea.
13. Inkqubo eqhubekayo yokujikeleza, iiparameter zoyilo ezizodwa, ngokuhambelana nesiphumo esiphakamileyo, isiphumo esihle sokubopha iteyiphu, icandelo elilicaba nelilihle.
14. Amavili kunye neeshaft zenziwe ngentsimbi enamandla amakhulu. Iigiya zenziwa nge-carburizing, ukucima kunye nokusila, kwaye inqanaba lokungaphumeleli kwezixhobo lincitshisiwe ngama-60%.
15.Ukusebenzisa inkqubo yolawulo lwenkqubo yekhompyuter, idatha yedatha yokufaka imemori ngokuzenzekelayo, kulula ukuyisebenzisa, kulula ukulungisa ingxaki.
16. Umgca wemveliso ye-PP unamabhanti amane, kwaye umthamo wemveliso ozinzileyo ufikelela kwiitoni ezi-5-6 ngosuku! Imveliso yemveliso ye-PP yamvanje ineebhanti ezintandathu, eyokuqala kolu shishino.
17. Ukhetho olungapheliyo lokutshintsha kwesikrini ngokuzenzekelayo! Zandisa izibonelelo.
Egqithileyo Umtya we-PVC we-Cable Trunking extrusion Line
Okulandelayo: Umatshini wokukhuphela umgca weBhodi ye-PVC
Umgangatho wokuveliswa kwepaneli yodonga kunye nodonga
Iifestile ze-PVC kunye nomgca wokuveliswa kweprofayili yomnyango
Umtya we-PVC we-Cable Trunking extrusion Line